Posted by ညီလင်းသစ် au 13.3.11
ဟုတ်တယ်နော် ... ရင်တွင်း ဒဏ်ရာတွေကို ဖွင့်မပြောရင် မသိနိုင်ဘူး။
ရင်တွင်းဒဏ်ရာကို ကုစားဖို့ကလဲ မျှဝေခံစား နားလည်ပေးတဲ့သူ ရှိမှ ... ။
ဒီလိုနဲ့ ဒဏ်ရာတွေက ရင်ထဲမှာ တစတစ လှိုက်စားလို့သွားရော။
အစွန့်ပစ်ခံ ပန်းသီးလေးက ... သနားစရာ ... ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ..........
ကလေးမလေး ၊ ပန်းသီး နဲ့ ဒဏ်ရာ ရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်ကို ရှာသွားတယ်...
ဟင်း ဟင်း., တို့လဲ ကိုယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်တခုမှာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် ရင်တွင်းက ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အားလုံးရဲ့ အပစ်ပယ်ခံ အစွန့်ပစ် ခံထားရသူဆိုတော့ ဒီပိုစ့်နဲ့ relate ဖြစ်လို့ ခပ်သဲ့သဲ့ ရယ်သွန်းလိုက်မိပါရဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှားခဲ့တာကို နောင်တမရပေမယ့် လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကို သင်ခန်းစာယူပြီး ခေါင်းမာ အရွဲ့တိုက်တတ်သူမို့ ဘယ်သူဘာပြောပြော၊ ဘာထင်ထင်၊ နွေးထွေးစွာ ဖေးမအားပေး ကူညီမှု့ ရှိရှိ မရှိရှိ ခပ်ပေပေနဲ့ ဆက်လျှောက်နေတုန်းပဲ။
ဒါပေမယ့် ရင်ထဲက နာကျင်နေတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပေါ့။ ဟတ် ဟတ် :)
အစ်ကို အငယ်လေးတုန်းက ပန်းသီးစားပုံလေးဖတ်ရတော့ ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းကလေး7upကိုသောက်ချင်လွန်းလို့ နေမကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတာ သွားသတိရတယ်း) အငယ်တုန်းက7 up ပုလင်းခွံ တွေကို ရှူရှိုက်ရတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်သတိရမိပါရဲ့ ။ အဆုံးသတ် စာကြောင်းလေး ၂ကြောင်းကတော့ ရင်ထဲထိတယ် အစ်ကိုရေ့ တစ်ခါခါ ကိုယ့်ဒဏ်ရာ ကိုယ်တောင် အတွင်းဒဏ်ရာလား အပြင်ဒဏ်ရာလား ခွဲမတတ်တော့ပါဘူး သွေးမထွက်ပေမယ့် ဒဏ်ရာတွေ ခဏခဏ ရလို့လေ ။
ငယ်ဘဝက ရခဲ့တဲ့ရင်တွင်းဒဏ်ရာတွေက တသက်စာ အနာတရဖြစ်စေတယ်... ဘယ်တုန်းကစပြီး အနာတရ ဖြစ်ခဲ့မှန်းမသိလိုက်ပေမဲ့ အဲဒီဒဏ်ရာကသတိထားမိချိန်မှာ အတော်အမြစ်စွဲနေပြီ မို့ ကုသချိန်မမှီတော့တာများပါတယ်... :(
Comme tes pommes, je me souviens de homard dont ma tante nousadonné à manger.
ငယ်ငယ်က ပန်းသီးကို အပြင်မှာတောင်မမြင်ဖူးဘူး..
နဲနဲကြီးလာတော့ မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို အင်္ဂလန်က လှူလိုက်တဲ့ ပန်းသီးကိုကျောင်းမှာဝေယျာဝိစ္စလုပ်ရင်းစပြီးစားဖူးတာ.သစ်တော့သီး မာမာ ကြမ်းကြမ်းစားနေကြဆိုတော့ ပန်းသီးကိုအမြတ်တနိုးစားကြည့်ရင်း..ပန်းသီးက ဝါးရတာနုးညံ့လိုက်တာလို့...
ခုတော့...ပန်းသီးလဲ မစားချင်ဆုံး..အစွန့်ပစ်ခံဘဝကို ရောက်နေရှာပြီ..
အရေပြားပေါ်မှာ ရတဲ့ဒဏ်ရာက ခဏလေးနဲ့ ကျက်ပြီးပျောက်သွားပေမဲ့ အသဲနှလုံးမှာရတဲ့ ဒဏ်ရာက တော်တော်နဲ့ မကျက်သလို လွယ်လွယ်နဲ့ လည်း မပျောက်ဘူးလို့ ............
တစ်ခုခု ခံစားလိုက်မိတယ် ...
ပန်းသီးတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုက်ခဲ့ဘူး။ အခုမှ စားဖြစ်အောင် တမင်ကြိတ်မှိတ်မြိုချ စားနေရတယ်။ ဆောင်းဆို တခြားအသီးတွေက မရှိဘူးမှုတ်လား
အချိန်က ကုစားလို့မရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ မများစေဖို့ပဲ ဆုတောင်းရုံပေါ့လေ။
ရင်တွင်း ဒဏ်ရာတွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ဖွင့်ဟ တိုင်ပင်မှပဲ အထိုက်အလျောက် သက်သာမယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ..၊ အနာတွေက လှောင်ပိတ်ထားရင် “ရင်း” တတ်တာ များတယ်လေ..နော၊
တခုခုများ တွေ့မိသွားသေးလား...၊း)
လူတိုင်းက မှားကြတာချည်းပါပဲ၊ မှားတိုင်းသာ စွန့်ပစ်ရ ကြေးဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးက အစွန့်ပစ်ခံ ဂြိုလ်ကြီး ဖြစ်နေ မှာပါပဲ၊ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း အဆုံးထိ ဆက် လျှောက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်ဗျာ...၊ မဟုတ်ဖူးလား?
သွေးမထွက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေလည်း ရဖူးတယ်ဆိုတော့ ညီလည်း အတွင်းကြေ ဖြစ်ဖူးတယ် ထင်တယ်...၊း)
တခါတခါတော့လည်း ဒဏ်ရာကို ပျောက်အောင်ကုဖို့ ထက် အနာမရင်းအောင်ကိုပဲ အနိုင်နိုင် ကြိုးစားနေရတာ တွေလည်း အများသားကလား...၊
onatous des souvenirs, ainsi, malgré la différence de prix entre une pomme et un homard. :D
(ကိုကြီး) ကျောက်သီး ...
ပန်းသီးကတော့ ကျနော်တို့ ငယ်ဘဝတွေရဲ့ တပင်တိုင် မင်းသမီးလေးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ (သီးလေးသီး မဟုတ်တဲ့ တကယ့်ပန်းသီးကို ပြောတာနော်..)း-)
ဟုတ်တယ်နော်၊ အသည်းနှလုံးက ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသမှာ နေလို့လား မသိဘူး၊ တခုခုဖြစ်ရင် ဆေးမှီဖို့ အနိုင်နိုင်ရယ်...၊
ခံစားလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ဟာက ဒဏ်ရာဟောင်းတွေ တော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူးဗျာ...၊း)
ပန်းသီးကလည်း မဆိုးပါဘူးဗျ၊ An appleaday keepsadoctor away လို့တောင် ဆိုထားသေးတယ် မဟုတ်လား...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ တခါတခါမှာ ဆုတောင်း၊ ပြီးတော့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာက ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက် တယ် မဟုတ်လား...။
နင့်နင့်နဲနဲ ခံစား လိုက်ရတယ်။
ငယ်ဘဝက တစ်ချို့သော အကြောင်းအရာ
တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု ကြောင့် ထင်ပါရဲ့ အကို။
ဒဏ်ရာထဲမှာတောင် အလှတရားကို ဖမ်းထားနိုင်တဲ့သူ..
ကလေးမလေးက သနားပါတယ်နော်။ အမေနဲ့ အဖေ ကွဲနေရင် သားသမီးတွေလည်း မိဘတွေနဲ့ အတူ မနေရဘဲ တကွဲတပြားနော်။ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ သူတို့လေးတွေ သနားပါတယ်။ ပာင်းးးးး လူကြီးတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အကြားမှာ ကလေးတွေက မြေဇာပင် ဖြစ်လို့။ မြန်မာလို တတ်ချင်စိတ် သင်ချင်စိတ် ရှိတာ ကလေးမလေးကိုရော၊ ကိုညီလင်းရဲ့ သားလေးကိုရော တကယ် ချီးကျုးမိတယ်။
သူ့ စိတ်ထဲဘာတွေများတွေးနေမလဲလို့ 
မှန်လိုက်တာရှင်.....ရင်ထဲကဒဏ်ရာကို ကျိတ်ကုခဲ့ရတာလည်း မနည်းပါဘူး။ ပုံလေးတော့ တော်တော်သဘောကျတယ်ရှင်။ အလင်းအမှောင် အယူအဆ နဲ့ ကိုယ်ပေးချင်တာကို ဘောင်ခတ်ပြီး ပြသွားတာ တကယ်သဘောကျမိပါတယ်။
ကျွန်မငယ်ငယ်က အဖြစ်ကို သတိရသွားတယ်
ကျွန်မတို့ဆီမှာက ပန်းသီးရှားတယ်လေ ဟိုတုန်းကပေါ့
အဲဒါ အဖွားက ဗုဒ္ဓဂါယာသွားတယ် ပြန်လာတော့ ပန်းသီးလှလှကြီးကြီးတွေ ပါလာတာ
တစ်ယောက်တစ်လုံးဝေတာ မစားရက်လို့ သိမ်းထားတာ ပန်းသီးကိုလေ ရေမွှေးလေးတောင် ဖြန်းလိုက်သေးတယ်.. အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ထားထားတာ
နောက်တော့ မစားရသေးခင် ပုတ်လာလို့ အားလုံးမပုတ်ခင် စားလိုက်ရတယ် ..
သတိရသွားပြီ.. ငယ်ဘ၀ကတော့ အမှတ်ရစရာတွေပါဘဲလေ
ဘဝတွေတိုင်းမှာ မမြင်နိုင် မတွေ့နိုင်တဲ့ ဒါဏ်ရာတွေ ကိုယ်စီနဲ့... ဒါဏ်ရာ တခု ကျက်ပြီး အနာသက်သာသွားရင်တောင် ဘယ်တော့မှ ဖျက်မရမယ့် အမာရွတ်က ကျန်ရစ်နေဆဲ...
by the way သားသား စကားပြောတဲ့ video လေးတွေတင်ပေးပါအုန်း အစ်ကို။
စာလာဖတ်တဲ့အတွက်ကော ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူး ပါပဲ ညီမရေ...၊
အလှတရားထဲမှာ ဒဏ်ရာတွေ ရှိနေတဲ့ နောက်တော့ ဒဏ်ရာထဲမှာလည်း အလှတရားတွေ ရှိနိုင်မှာပဲလို့ ထင်မိတာပါပဲဗျာ...၊း)
မိဘကိုပဲ မှီခိုနေရတဲ့ ကလေးတွေ ဘဝကတော့ တကယ်ပဲ သနားစရာကောင်းပါတယ်၊ လူကြီး မလိမ္မာရင် ကလေးမလိမ္မာတာထက် အများကြီး ဆိုးတယ်နော်..၊
ကျနော်နဲ့ အတွေးတူလိုက်တာ..၊ ကျနော်လည်း သူ ဘယ်လို ခံစားချက်တွေနဲ့ ပြန်သွားခဲ့လဲလို့ စဉ်းစားနေမိ သေးတယ်...၊
လာပြီး အားပေးခံစားတာ ကျေးဇူးပါပဲနော်...၊
ပန်းသီးကို ရေမွှေးတောင် ဖြန်းထားလိုက်သေးတယ် ဟုတ်လား...ဟားဟား၊ အင်း...မပုပ်ခင် စားမှာလား၊ မစားခင် အပုပ်ခံမှာလား၊ ဒါလည်း ရွေးချယ်မှုတွေထဲက တခုပါပဲလေ.....နော၊း)
ဟုတ်တယ်၊ တချို့ဒဏ်ရာတွေက ရလိုက်ပြီဆိုရင် တသက်စာအတွက်ပဲ ထင်တယ်နော်၊ ပျောက်သွားရင် တောင် အမာရွတ်က မှတ်မှတ်ရရ ကျန်ခဲ့တာ....၊
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါတွေချည်းပဲ တင်နေရင် လာလည်သူတွေ ငြီးငွေ့မှာ စိုးလို့ ကျနော်က ကိုယ်ရှိန်သတ်ထားတာပါ၊း)
အခုလို စိတ်ဝင်စားတာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်၊ အဆင်ပြေတာနဲ့ တင်ဖြစ်ပါ့မယ်နော်...။
ကျမနဲ့သမီးလည်း မိတ်ဆွေခလေးတွေ အိမ်မှာဆုံဖြစ်ရင် တပြားနှစ်ပြားတို့ ကွမ်းသီးလေးလုံးတို့ ဗိုလ်ကျားသေနပ် တို့ လို ဗမာ ခလေးကစားနည်းတွေ အတူ ကစားဖြစ်တယ် သူတို့တွေ သိပ်သဘောကျတယ်လေ ... ဒီကခလေးတွေမှာလည်း အဲလိုမျိုးဂိမ်းတွေ အများကြီးရှိတာ သမီးဆီကနေ သိရတယ် ...
ဘယ်ကလေးတွေကိုမှ ဘာဒဏ်ရာမှ မရစေချင်ဘူး ညီလင်း ရေ ...
သြော် ဒဏ်ရာ ဒဏ်ရာ
ဓါတ်ပုံ ဆရာပဲ လုပ်ပါတော့
Whenever i see half eaten and left apple,i'll remember the little girl and you.Everybody has at leastalittle scar in heart cos all are just ordinary humanbeing.C'est la vie.La vie n'est pas en rose toujours.
ဟုတ်တယ်နော်၊ အဲဒီ ရိုးရာကစားနည်းလေးတွေကို ကလေးတွေ ကြိုက်ကြတယ်၊ ဒီမှာလည်း အဲဒါမျိုးတွေ ကစားတာ တွေ့ဖူးတယ်..၊
အခုလို လူတိုင်း ကင်မရာကိုင်နေကြတဲ့ ခေတ်မှာ ပရိုဖြစ်ဖို့ကတော့ တော်ရုံ အရည်အချင်းနဲ့ဆို မလွယ်တော့ဘူး ထင်တယ်ဗျ...၊း)
You're right! We all have some sorts of scars somewhere in heart. :)
တခါတလေ ကျွန်မကိုသူက ဆုံးမဘို့စောင့်ကြည့်နေတာ။
အောက်ကျနေတဲ့ မုန့်တွေဘာတွေကောက် ပြီးလွှတ်ပစ်ဘို့လုပ်ရင် မယူရဘူးနော်လို့ သူကအော်တယ်။
ပန်းသီးဓါတ်ပုံ ကိုကြည့်ရတာ ဒဏ်ရာတစ်ခုကို ကြည့်ရသလိုပါပဲ။
ဒီဒဏ်ရာဆိုတဲ့ပို့စ်လေး ဟိုးတစ်ခေါက်ဖတ်ကတည်းက ရက်စွဲကို သတိပြုမိတယ်။ ပြီးတော့ တိုးတိုးလေးရေရွတ်မိတယ်၊ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာလို့...။